Itoobiya oo maanta ku jirta maalin tacsiya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Itoobiya oo maanta ku jirta maalin tacsiya
Itoobiya ayaa maanra oo Isniina ku jirta maalin tacsita kadib markii shalay ditaarad ay keedahay oo cusub ay burburtey halkaana ku dishey 157 qof oo saarnaa oo ay ku jreen 14 qof oo Itoobiyaana. Itoobiya ayaa ku dhawaaqdey inay fariisisay dhamaan diyaaradaha la midka ah diyaaradii shalay dhacdey.
Itoobiya ayaa ka fikiraysa inay hakiso ama gebi ahaanba joojiso soo iibsiga inta kale ee welli lagu jiro samayntooda. Itoobiya ayaa dalbatey 50 diyaaradood oo nooca cusub ee shakay dhacdey ah oo qaada midkiiba 210 qof.
Dhinaca kale Shiinaha ayaa isna joojiyay in ka badan 90 duulimaad oo ay samayn lahayd diyaaradii shalay burburtey.
Wadamada Carabta oo xoog u iibsadey diyaaradan Boowin 737 max ayaan iyagu ku dhawaaqin talaabo ay qaadayaan.
Waxa hadda lagu guulaystey in la helo sanduuqa codka duuba iyo sanduuqa mscluumadka oo labaduba loogu talogalay inay ka badbaadaan burburka noocana. Dayax gacmeedka hawada ee ku raadjooga diyaaradaha caalamka ayaa sheegay in geerka kor u fuulida ay ciladi ka timi iyo isgaarsiinta gudaha diyaarada oo qalqalay.